Amaokwu Baịbụl dị n’isiokwu a: Nkwuwa okwu -> Ezigbo agwa
Ezigbo agwa: [Nkwuwa okwu]
 Ugbu a Onyenwe anyị, lee ịba mba ha nile. Nyere ndị ozi gị aka ikwusa okwu gị na-atụghị ụjọ. Nyere anyị aka site nꞌisetipụ aka gị ịgwọ ndị ọrịa, na ime ihe ịrịba ama na ịrụ ọrụ ebube site nꞌike Jisọs, Ohu gị dị nso.” Mgbe ha kpesịrị ekpere, ụlọ ahụ ha zukọrọ nꞌime ya mara jijiji. Ha nile jupụtakwara na Mmụọ Nsọ. Ha gakwara nꞌihu ikwusa ozi ọma Chineke na-atụghị ụjọ.
Otu ọ dị, Pọl na Banabas nọgidere nꞌebe ahụ ogologo oge. Ha na-ekwusakwa okwu Onyenwe anyị. Chineke gosikwara na ọ bụ okwu ya ka ha na-ekwu site nꞌinye ha ike ịrụ ọrụ ịrịba ama dị iche iche.
ỌLU OZI 13:46
Ma Pọl na Banabas jiri olu ike na-ekwu okwu Onyenwe anyị. Ha na-ekwukwa sị, “Ọ dị mkpa na ozi ọma a ga-ebu ụzọ rute ndị Juu. Ma dị ka unu siri jụ ịnabata ya nke ọma, unu na-egosi na unu ekwesịghị ịnata ndụ ebighị ebi nke Chineke na-enye unu. Ugbu a, anyị ga-ewerekwa ozi ọma ahụ jekwuru ndị mba ọzọ.
ỌLU OZI 4:29-30
 Ugbu a Onyenwe anyị, lee ịba mba ha nile. Nyere ndị ozi gị aka ikwusa okwu gị na-atụghị ụjọ. Nyere anyị aka site nꞌisetipụ aka gị ịgwọ ndị ọrịa, na ime ihe ịrịba ama na ịrụ ọrụ ebube site nꞌike Jisọs, Ohu gị dị nso.”
Nwanyị ahụ zara sị, “Enweghị m di.” Jisọs sịrị ya, “Ị kwuru eziokwu.
 Kpeekwaranụ m ekpere, ka Chineke tinye nꞌọnụ m okwu ahụ bara uru ọ chọrọ ka m kwuo. Ka m nweekwa ike ịgwa ndị ọzọ banyere Onyenwe anyị na-atụghị egwu. Ịgwa ha ihe omimi ahụ dị nꞌozi ọma. Ọ bụ nꞌihi ozi ọma a m na-ekwusa, ka m ji nọọ nꞌụlọ mkpọrọ. Ma kpeerenụ m ekpere ka m nwee ike ikwusa ozi ọma na-atụghị egwu, ọ bụladị nꞌụlọ mkpọrọ a, dị ka o si kwesị ekwesị.
ỌLU OZI 4:13
Mgbe ha hụrụ na Pita na-ekwusi okwu ike, na-atụghị ụjọ, chọpụtakwa na ha bụ ndị na-amaghị akwụkwọ, ndị a na-azụghị nꞌụlọ akwụkwọ ndị Juu, ndị mmadụ efu, o juru ha anya! Ma mgbe ahụ ha chetara na ha bụ ndị ha na Jisọs yịkọrọ.
ỌLU OZI 5:29
Ma Pita na ndị ozi ọzọ nọ nꞌebe ahụ sịrị, “Anyị enweghị ike ịhapụ ime ihe Chineke chọrọ. Anyị agaghị emekwa ihe mmadụ chọrọ.
1 KỌRINT 3:12
Ma e nwere ọtụtụ ihe dị iche iche mmadụ pụrụ iji wuo ụlọ nꞌelu ntọ ala ahụ. Ụfọdụ ga-eji ọlaedo na ọlaọcha, ma ọ bụkwanụ nkume dị oke ọnụ ahịa wuo nke ha ṅdị ọzọ ga-eji osisi okporo ọka ma ọ bụ ahịhịa wuo nke ha.